Naya Drishti | को हुन देउवाले परराष्ट्र मन्त्री नियुक्त गरेका खड्का ? - Naya Drishti को हुन देउवाले परराष्ट्र मन्त्री नियुक्त गरेका खड्का ? - Naya Drishti
असोज ०६, काठ्माण्डौं । विसं २००५ साल चैत ७ गते भोजपुरमा स्वर्गीय चित्रबहादुर र धर्मकुमारी खडकाको कोखबाट जन्मेका डाक्टर नारायण खड्काले भारतको पुनेबाट अर्थशास्त्रमा विधावारधी (पीएचडी) गरेका छन् ।
पार्टीको राजनीतिमा पनि खड्काको उपस्थिति राम्रै छ । काँग्रेसको १२ औँ महाधिवेशनदेखि खड्का केन्द्रीय कार्यसमितिमै छन् । खड्कालाई काँग्रेसमा विकासवादी नेताका रूपमा लिइन्छ । तर, उनको रुचि भने वैदेशिक मामिला तिरै बढी देखिन्छ । खड्काले वैदेशिक मामिलाबारे दुईवटा किताब लेखेका छन् ।
खड्काले पछिल्लो समय वैदेशिक नियोगका पदाधिकारीलाई देउवासँग भेटघाट गराउने सूत्रधारका रूपमा काम गर्दै आएका थिए । सरकार निर्माणका सन्दर्भमा पनि बाह्य वातावरण मिलाउने भूमिकामा खड्का अग्रसर थिए ।
वैदेशिक मामिलामा रुचि राख्ने खड्काले पछिल्लो समय मित्रराष्ट्रहरूसँग देउवाको सम्बन्ध नवीकरण गर्न राम्रै भूमिका खेलेको काँग्रेस नेताहरू बताउँछन् । यो बीचमा देउवासँग विदेशी प्रतिनिधिले गर्ने भेटघाटमा खड्का प्रायः सँगै हुन्थे । संसद् विघटनपछि राष्ट्रिय राजनीतिबारे देउवा र खड्काको धारणा पनि समान थियो ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले परराष्ट्र नीति खलबल्याएको प्रधानमन्त्री देउवा र खड्काको साझा निष्कर्ष छ । त्यसलाई ट्रयाकमा ल्याउन परराष्ट्र मन्त्रालय काँग्रेसले नै राख्ने नीतिअनुसार नै खड्कालाई परराष्ट्रमन्त्री बनाइएको काँग्रेस नेताहरू बताउँछन् ।
#परराष्ट्र मन्त्री #खड्का
एमसिसी बारे अमेरिका पुगरे परराष्ट्र मन्त्री खड्काले दिए यस्तो प्रतिक्रिया